Isethulo esicijise imikhonto nxazonke – Bayede News
Kucace zibekwa ukuthi ibhixene uZuma
by Bayede-News Posted on 19 July 2019 12 August 2019
OwayenguMengameli uMnu uJacob Zuma
Kucace zibekwa ukuthi ibhixene uZuma ebhoboka ngosekwenze waba kule Khomishini
Emveni nje kwemizuzu engamashumi amathathu eqale ukwenza isethulo sakhe ebesilindwe ngabovu kuKhomishini ephenya ngezinsolo zokugwamandwa koMbuso, uMnu uJacob Gedleyihlekisa Zuma ukwenze kwacaca ukuthi usempini kawafa wafa aziyo ukuthi kuyo kuyosala oyedwa. Indaba yendlalelwe ngummeli wakhe u-Adv uMuzi Sikhakhane obevutha engabaselwe. UMboma (abakwaSikhakhane) usola iKhomishini ngemizamo yokuhlinzela uZuma ezibini nokungabi nobulungiswa futhi acinelelwe.
“Lesi simomqondo sokucinelela ukuthi abantu bafika nemibono yabo futhi baphathe abanye ofakazi njengezithandwa kuthi abanye baphathwe njengabasolwa,” kusho uMboma. Uqhube ngokuthi njengabameli kabamcijanga uZuma ngoba abanikwanga uhlu lwemibuzo, kulokhu uthe: “Siyakholwa futhi ukube besinikwe ithuba lokuzilungiselela kuMnu uZuma sabuye sameluleka ngamagama okufanele awagagule, ngokuthi angekwenze lokho ngaphandle kokuthi labo bantu baziswe. Le nqubo ibizohamba kahle.”
Inkulumo kaSikhakhane icacele noma ngubani ukuthi ibigadla kubameli beKhomishini ikakhulukazi umholi wabo u-Adv uPaul Pretorius. Akukhona okokuqala ukuba abameli beKhomishini basolwe njengoba abanye ofakazi bake bakhala ngokuthi bezwa sekukhulunywa ngabo benganikwanga ithuba lokuphendula. Okunye leKhomishini eyabe isolwa ngakho “wukuputshuka” kwezethulo ikakhulukazi emaphephandabeni esilungu angempelasonto. Enza isethulo sakhe kule Khomishini uMnu uMuziwandile Manyi wadumelana nomunye wabameli beKhomishini u-Advocate u-Isaac Maleka SC nayemsola ngokwenzelelela nokuba yisakabuli.
UZuma uqale ukuveza izinhloso zakhe ngokuqala kwakhe eminyakeni engale kwaleyo iKhomishini enamandla okuyiphenya. Akubanga yiphutha kepha yiqhingasu ebelinezinhloso ezahlukene nokuyisikhathi kuphela esiyosho ukuthi ngabe liphumelele yini. Isethulo sikaZuma besithumela umlayezo ngaphakathi nangaphandle kweqembu elibusayo i-African National Congress (ANC). Ngaphakathi eqenjini kuvuke izinsolo ezindala zokuthi ngezikhathi zobandlululo kwabe kukhona abakhumuza le nhlangano nezinhlaka zayo besebenzela umbuso wamadlagusha.
Selokhu kwathi nhlo lolu wudaba olubucayi kuKhongolose ngoba sekunabantu abasenhlabathini ngenxa yemisebenzi yezingede okuvela ukuthi zabe zixova ubunye bale nhlangano nokwabe kuyingxenye yempi yomshoshaphansi phakathi kwabacindezelwa nabacindezeli.
Ngaphandle kwamagama awadalulile njengezingede nokulindeleke ukuthi labo abanekelwe izwe baziphendulele, uZuma lapha ubenenhloso. Eyokuqala ukuhlalisa lubhojozi abathile nokunciphisa abantu abazophawula ngalolu daba. Enza isethulo sakhe uMsholozi uthe ‘wathola uhlu’ lwezingede. Lokhu wakwenza ngabomu ngoba labo ababeyizingede, uma bekhona, bahleli lubhojozi sikhuluma nje. Abanye abahleli lubhojozi yilabo ababesebenza nazo izingede lezi ngasohlangothini lukaHulumenui wobandlululo. Enza isethulo uMsholozi wathi itulo lokuqeda ngaye labe liphekwa yizinhlaka zobunhloli zangaphandle kanye nalolo olwabe luyizinsalela zombuso wobandlululo okungenzeka ukuthi namanje lusekhona futhi kalifuni ukwaziwa.
UMsholozi wazi kahle kamhlophe ukuthi izwe lobunhloli ngelabakhethekile ngakho noma ngabe uthini bancane abazomphedula ngolwazi. Into yesibili ayivezile nezofaka uHulumeni, iKhomishini nezinhlaka zokuphepha engcindezini wudaba lokuphepha kwakhe kanye nomndeni wakhe. Ngenxa yokuvela kwalokhu uMbuso kuyomele uthathe isinqumo sokuthi uyabahlinzekela yini abomndeni wakhe ngezokuphepha nokuthi uyengeza yini kuye njengoba vele unabo abaqaphi boMbuso njengokwesikhundla sakhe esidala sokuba nguMengameli wezwe. Noma yini eyenzeka kuye nakumalungu omndeni wakhe isiyonisela lokhu akutshale esethulweni sakhe sokuthi kabaphephile. Ngamafuphi umbuso kuyomele manje uqinisekise ukuthi akukho okwenzeka kuye ngoba uma nje eke waklwebheka kungenzela izwe libe ngumlotha.
Kanti nezitha zezwe kanye nezikaKhongolose okungaba nayizinhlaka lezi zezinhloli abekhala ngazo zingasebenzisa leli thuba lokuzama ukwenza okuthile kuye bese izwe liyabheduka.
Emazweni asentshonalanga nakulawo ayebuswa ngamaKhomanisi njengeChina ne-USSR osekuyiRussia osesikhundleni esinjengaleso uZuma ayekuso sokuba ngumphathi wezinhloli uhlale ebhekwe ngolokhozi ngoba eqinisweni angaliphatha izwe futhi alenze libe ngumlotha ngolwazi analo abaningi abangenalo. UZuma ube sezikhundleni ezimbili ezimenza abe nolwazi abaningi abangenalo, esokuhola uphiko lobunhloli kuKhongolose kanye nokuba nguMengameli wezwe obekumenza abe negunya lokuthola amafayela ayimfihlo ngabathile kanye nezimo ezithize ezweni nasemhlabeni jikelele. Ngenxa yesethulo sakhe uZuma uKhongolose uzonyakaza ngoba kuzovuka izinsolo ezindala. Ngamafuphi kungahle kuvuke izimpi nezinsolo zasekudingisweni. Ukungabi bikho kwabantu abafana noMnu uJoe Nhlanhla, uJoe Modise, uJoe Slovo no-OR Tambo kwenza uZuma abe ngomunye wabambalwa abangaba nolwazi lwalokho okwenzeka. Uma kukhona abamphikisayo kulabo ababekhona kungenzeka ukuthi unolwazi lokuthi ukuphawula kwabo kuzovusa ezinye izinto ezingenza kube nzima ukwethembana. Emveni kwesethulo uNobhala Jikelele we-ANC uMnu u-Ace Magashule uthe kuyomele kube nophenyo ngalezi zinsolo. Kulokhu wesekwe ngaboMkhonto Wesizwe Military Veterans Association (MKVA) abathe:
“Ayikho indlela engavumela ukuba i-ANC ukuba iholwe izimpimpi noma ababeyizimpimpi. Eqinisweni, sihambisana nesiqubulo esithi: ‘Uma wake waba yimpimpi uyohlala uyimpimpi Iyaqinisa iMKMVA ukuthi i-ANC kufanele isungule iKhomishini esemthethweni eqotho ezophenya labo abakhonjwe ukuba yizimpimpi ebufakazini bukaZuma. Le Khomishini kufanele futhi yenze uphenyo olubanzi ezindabeni ezinqala zobumpimpi ku-ANC kanye nokungenwa kwe-ANC umfutho wezinguquko eziphikisa ezokuqala.”
Umbuzo uthi ngabe konke lokhu uKhongolose uyokuvuma yini nokuthi kuyosiza bani. Khona osebanjiwe ukuthi wayeyingede uzokwenziwani emuva kweminyaka engama-25 yedemokhrasi? Khona uma konke sekuphumela obala kungeke yini kwayidabula phakathi i-ANC nokuthi izimbangi zayo ezifana ne- Economic Freedom Fighters (EFF) ngeke yini zingene ngenxeba? Zonke izimpendulo kule mibuzo ziyovezwa yisikhathi lesi uKhongolose ongenaso. Isethulo sikaZuma ngenhloso sicijise imikhonto nxazonke.
Posted in Ikhomishini, Ipolitiki, Ukuhlaziya